‘हिम्मतवाली’ रेखाले किन खेलिन्, सविरले किन बनाए ‘तथास्तु’ ? « रंग खबर
‘हिम्मतवाली’ रेखाले किन खेलिन्, सविरले किन बनाए ‘तथास्तु’ ?
आउँदो पौष २५ देखि देशव्यापी प्रदशर्नमा आउन लागेको फिल्म ‘तथास्तु’ अहिले चर्चामा छ । योसंगै अन्य दुई फिल्म पनि प्रतिष्पर्धामा छन् । तर रेखा थापा अभिनित फिल्म भएकाले ‘तथास्तु’ को चर्चा व्यापक छ जसलाई नकार्न सकिन्न । रेखासंगै सुवास थापा, किशोर खतिवडा र विज्ञान जोशीको पनि फिल्ममा मुख्य भुमिका छ । यहि फिल्मबाट ‘कसले चोर्यो मेरो मन’ र ‘काली’ जस्तो व्यवसायिक रुपमा सफल फिल्म निर्देशन गरिसकेका निर्देशक सविर श्रेष्ठले निर्माणमा समेत हात हालेका छन् ।
तथास्तुको ट्रेलर हेर्न यँहा क्लिक गर्नुहोस्